Duuliyayaasha diyaaraddii Pakistan ku bur-burtay oo corona ku murmaayay - Calanka.com
Warbixin ay soo saartay wasaaradda duulista hawada dalkaasi Pakistan ayaa waxa ay kaga hadashay diyaaraddii dhawaan ku burburtay duleedka garoonka caalamiga ah ee magaalada Karachi ee dalkaasi Pakistan taas oo galaafatay nolosha dad boqol qof ku dhow.
Wasiirka wasaaraddaasi Ghulam Sarwar Khan oo warbaahinta la hadlay isaga oo ka warbixinaya warbixinta horudhaca ah ee ay soo saareen ayaa sheegay in ciladdii ay diyaaraddu u dhacday ay aheyd cilad dayac dhanka duuliyayaasha ah.
Mr. Ghulam ayaa sheegay in markii ay dhageysteen waxa uu duubay sanduuqa madow ay maqleen duuliyayaasha oo maanta dhan ku murmaaya ama ka sheekeynaya cudurka coronavirus ee adduunka ragaadiyay.
Wasiirka ayaa hadalkiisa intaa ku daray in labada duuliyeba aysan jirin cid raaceysay shuruucda diyaaradda xilligii ay dhaceysay.
Diyaaraddan oo ay laheyd shirkadda Pakistan International Airlines (PIA) ayaa siday dad gaarayay 97 ruux oo isugu jiray shaqaale iyo rakaab, waxaana waxaa ay ku dhacday xaafad ku taal duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada Karachi, 22. mai.
Labo ruux ayaa ka badbaaday shilkan diyaaradeed.
Donald Trump oo walaac ka muujiyay xaaladda caafimaad ee hoggaamiyaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un